What are the ways to be Amazon TOP searches?
Kuti uwane pfungwa yakanaka yekuti ungava sei Amazon TOP searchers, unofanira kuwana mufananidzo wakajeka wekutengesa kuAmazon kunosanganisira. Kuti uone kuti iwe unonyatsovaka purogiramu yako yekutengeserana, tarisa ichi chinyorwa kuti uone kugadzirisa zvinhu zvaunofanira kuziva. Ichi chinyorwa chichazarura maziso ako kuAmazon anokoshesa katatu uye kukubatsira kuti uwane mari imomo kunze kwekuedza.
Kutsvaga vari kuongorora ma Amazon dzoka kune peji peji rekushandisa uye wozorora pane zvinopiwa zviri pasi apa tsanangudzo yemuchina kuti uone zvinowanikwa zviripo. Zvisinei, chinhu chokutanga maAmerica vatengesi vanowanzotarisa ndezvekutenga bhokisi. Ichi chikamu chinoratidzira zvakasiyana-siyana mukati memisika yemisika. Maererano nehuwandu hwemashoko, $ 56 mabhiriyoni emadhora madhora makumi matanhatu nemazana matanhatu eAmerica anotengesa ikozvino. Vatengesi vanoziva kuti vanogona kuvimba neAmazon sarudzo nokuti inofunga nezvezvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai semutengo, unhu, kukosha, nezvimwe zvakadaro. Kushandisa ibhokisi rekutsvaga, vatengi vanogona kutanga kutenga nzira yavo nekuwedzera michina pamatokari avo okutenga.
Pamusana pemakwikwi akakwirira eAmazon, haisi basa rakanyanya kuva mutengesi uyo anotora bhokisi rekutenga. Izvo hazvirevi kuti kana iwe ukakwira kumusoro kuAmerica SERP, iwe uchava mutengesi. Kuti uwane bhokisi rekutenga, unofanirwa kutevera Amazon mazano uye kuva anokosha kune vatengi vako.
Zvimwe zvinokanganisa apo mutengesi anowanikwa pane urongwa hwekugovera:
Unofanirwa kupa vashandisi nemutengo wokukwikwidza kuti uwane bhokisi rekutenga. Inosanganisira kwete chete mutengo wezvigadzirwa asi mari yekuendesa zvakare. Vatengesi vari kutsvaga michina yaidiwa kuAmazon vanogona kuenzanisa matengo ose uye vanogona kusarudza mutengo wakaderera pamusika. Kuti uchengetedze mutengo wako wokukwikwidzana, unofanirwa kutungamirira mukukwikwidza kuongorora nguva dzose. Uyezve, zvinonzwisisika kushandisa zvishandiso zvekugadzirisa zvinhu.
Zvaunofanirwa kuita zvinofanira kukwikwidzana sezvo vatengesi varipo, inokwira kumusoro.
Kukunda bhokisi rekutenga kuAmazon, unoda kuva nenguva yakareba uye yakanaka yekutengesa. Amazon inofunga nezvekutsvaga kwevatengi vako uye yevhareji yenhamba yekutenga pamwedzi. Sezvo mutemo, zvigadzirwa izvo zvangobva kuonekwa kuAmazon market hazvigoni kuve vatengesi.
Zvimwe zvakawanda zvinokonzera Amazon chisarudzo chechimwe mutengesi. Zvisinei, izvo zvataurwa pamusoro apa ndezvine simba. Mhinduro inogadzirisa iri pano ndeyekuti uone kuti chero kutengesa kwaunogamuchira kuburikidza neAmai run run. Iwe unofanirwa kugovera vatengi nevanonyanya kubatsirana nevatsigiri uye vanogara vachibatsira..
Amazon kuzadzikisa chirongwa chakagadzirwa neAmazon kuti chibatsire vatengesi vekutsvaga kutengesa zvinhu zvavo. Kushandisa purogiramu iyi, unogona kutumira zvinhu zvako kune imwe yenzira dzakawanda dzeAmaza dzinozadzirwa. Zvinoreva kuti nguva imwe neimwe mutengi akatenga zvigadzirwa kubva kwauri, Amazon inovatumira. Iyi purogiramu inokubatsira kuti uchengetedze nguva yako uye isa pfungwa pane dzimwe nzvimbo dzekushanda bhizinesi rako. Amazon inotora zvinhu zvakawanda zvekutumira uye kushandiswa kwevatengi pamwe nekuwedzera kusvika kwezvigadzirwa zvako kuAmai Prime Members, uye kubatsira kukunda bhokisi rekutenga.
Mazano ekugadzira zvipfeko zvako TOP yakatsvaga ku Amazon
Izvo zvakanaka chibereko chekuongorora zvakakosha pakukwirira kwako kuAmazon. Izvo zvinofanira kuonekwa kuti tinotaura nezvekuongorora pane peji yezvigadzirwa peji yako, asi kwete nezvekugadzirisa purogiramu yako yekutengesa. Kubvira pakupedzisira Amazon algorithm inoshandura, zvinorambidzwa kutanga vashandisi kusiya zviongorori mukudzoka kwezvipo, zvidzidzo, nezvimwe. Ndicho chikonzero iwe unoda kuwana maitiro ekugadzirisa. Imwe yenzira dzakanakisisa dzokuita nayo ndeyokupa vashandi vako nepamusoro pekutengesa chiitiko. Edza nepaunogona napo kuti uwane maitiro akanaka ekugadzirwa kwezvinhu sezvaanotungamirira kune zvikwata zvepamusoro uye zvimwe kutsvaga motokari, uyezve mamwe mairairo nekutengesa.
. Kutanga, iwe unofanirwa kuongorora kutsvaga mazwi uye kuwana zvakakosha pane zvebhizimisi rako rekutsvaga mazwi anogona kushandiswa pakutsanangura kwako kukurudzira. Pachikamu chechipiri, unofanirwa kushandisa mazwi aya ezvinyorwa muhurukuro yako uye tsanangudzo kuita kuti kuverenga kwako kuve kwakanyatsogadzirika uye kuonekwe pane peji rekutsvaga ma Amazon. Zvisinei, iwe haufaniri kukanganisa kuverenga kwako nemashoko emazuva ano semazuva ano Amazon algorithm inobata uye iwe unogona kurangwa nokuda kwayo. Ndicho chikonzero chiita zita rako rechisikirwo, rakanyatsojeka uye riri kuita kuti vatengi vatsve pazviri kubva pane zvitsvakurudzo. Kuti uite nyore mazwi enyu ekutsvakurudza, iwe unogona kushandisa imwe yezviongorori zvinoratidzira mashandisi seGoogle Keyword Planner kana Amazon Keyword Tool.
Zvakagadzirwa zvakanaka zvakagadziriswa
Zvigadzirwa zvakanaka zvakagadzirwa zvinogona kukubatsira kuti uwane nguva yakareba yekutengesa. Muchikamu chedu chekare, takapa zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zvingaita kuti kuverenga kwako kuve kwakanaka. Ndicho chikonzero pano ini ndichanyora nhamba yezvigadzirwa zvekugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirisa izvo zvinogona kuchinja maitiro ako-kudarika kuburikidza nekushandura:
kuvimbwa uye kubata zita rechirwere;
Chirondedzero chakakwana chezvigadzirwa nezvinhu zvose zvinoshandiswa mumiti uye zvisikwa zvinobatsira;
Chigadzirwa chemhando nemhando yekukwanisa kusimbisa;
Urwu hunotsanangurwa nevashambadzi veAmazon pane zvavanonzwa sokukosha uye izvo zvavanoda pedza pairi. Mutengo wako unofanirwa kuva wakanzwisisika uye unotarirwa pamusana pemaitiro emashamba. Inogona kusimudza kana kuwira nenguva kana kuti kuonekwa kwechivandudziro itsva yehuwandu hwechigadzirwa chako. Mutengo wako haufaniri kunge wakaperera zvakanyanya sezvo unogona kureva nyaya dzakanaka dzevako vanogona kutenga. Ndicho chikonzero chiedza kutarisa pane chinotungamira chigadzirwa chekiti chako Source .